ငိုလိုက်ကြစို့သူငယ်ချင်း | PoemsCorner
ဆာလည်းငို နာလည်းငို လိုလည်းငို စိတ်မကြည်လင်လည်းငို
ရှိုက်ကြီးတငင်ငို အသံကုန်ငို လူးလှိမ့်ငို မရပ်မနားငို အားရပါးရငို
အဲဒီငိုခြင်းတွေထက် ထူးကဲတဲ့အရသာ ဘယ်မှာမှမရှိ……။
ဒီနေ့အရွယ်ရောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေ ငိုရင်
အမြင်မတော်ဘူးတဲ့ ကလေးကလားတဲ့ ပျော့ညံ့သူတဲ့
ယောက်ျားမပီသသူတဲ့ မရင့်ကျက်သူတဲ့ အသည်းငယ်သူတဲ့
မငိုသင့်ဘူးတဲ့ မငိုရဘူးတဲ့ အသည်းမာရမယ်တဲ့
သူများထက်ဦးအောင် ပြုံးနိုင် ရယ်နိုင်မှ
ရင့်ကျက်သူတဲ့ လူလိမ်မာတဲ့ လူ့ပညာရှိတဲ့
ဆာတတ်တယ် နာတတ်တယ် လိုအင်ဆန္ဒတွေရှိကြတယ်
တာကြောင့် တို့လူကြီးတွေ ဘာကြောင့်မငိုကြရမှာလဲ
ဆာလောင်မှုတွေ နာကြင်ခံစားမှုတွေ ပူပင်သောကတွေဟာ
နှလုံးသားမှာ ဦးနှောက်တွေမှာ ဗလပွနဲ့တောင်
အရွယ်ရောက်ပြီး တို့လူကြီးတွေ မငိုရတော့ဘူးတဲ့လား…..။
အသွေး အသား နှလုံးသားတွေနဲ့
လူမှန်ရင် လူဆန်စွာ အခက်အခဲတွေရှိမယ်
အလွမ်း အဆွေး အငိုတွေရှိမယ်
လူဖြစ်ကတည်းက မျက်ရည်တွေ မျက်ရည်ကန်တွေ
ပါးစပ်တွေ နာရည်တွေ ပါရှိလာတယ်
တာတွေကို အသုံးပြုပြီး မငိုကြဘူးဆိုရင်
တို့တွေဟာ လူသားစစ်စစ်ရယ်လို့ ခေါ်ထိုက်ပါ့မလား…..။
ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဒဏ်ချက်တွေကြောင့် တောင့်တင်းသွားတဲ့
ငိုကြွေးခြင်းထက် ကောင်းတဲ့ဆေး ဘယ်မှာရှိလဲ
မငိုချင်တဲ့အရောင် ဆောင်ထားခြင်းနဲ့ လူသားတွေရဲ့
In: ကဗျာ Posted By: khun.k Date: May 25, 2010
Leave comment5Comments & 645 views
By: နော်ဧရာဝတီ at Jul 29, 2010
Thanks so much about that you leaved comment on my pages. And I really happy with your an encouragement, of course.
By: ခွန်ကြယ်ဖြူ at Jul 31, 2010
ဒို့ တော့ မှတ်မိတဲ့ အ၇ွယ် ငယ် ဘ၀မှာ မငိုမိအောင်ဟန်ဆောင်တင်းထားခဲ့ တယ်.. ၀မ်းနည်းစ၇ာတွေနဲ့ ကြုံ၇တဲ့ အခါတွေမှာ…. ငိုတာ မကောင်းဘူးလို့ ထင်ခဲ့ လို့အတုယူခဲ့ လို့ ပေါ့လူကြီးတွေကို…စိတ်ထဲမှာ ကာလတော်တော်ကြာကြာဝမ်းနည်းနေခဲ့ ၇တယ်.. သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အတွက်
စာလေးတခုဖတ်မိ၇ာကနေ စိတ်ကူးပြောင်းသွားတယ်…ငိုစ၇ာကြုံလာ၇င် ငို၇မယ်ပေါ့ .. သူေ၇းတာကတော့ ၇ှူဒေါင့် တမျိုးကနေပါ.. ဈေးသည်တယောက် ဈေးတောင်းမှောက်တာကို ၇ီကြတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ ထဲ သူ့ သမီး ပါမှာ စိုးတယ်ဆို ပီးေ၇းတာ…လူသားဆန်၇မယ်. ဒါ စိတ်မကောင်းစ၇ာ ၇ီစ၇ာမဟုတ်ပေါ့ …အဲဒီစာ လေးဖတ်ပီးတော့ငါ လည်း ငိုလောက်တဲ့ ဝမ်းနည်းစ၇ာကြုံ၇င် ငိုသင့် တယ် လို့ စိတ်ဝင်လာတယ်.. ခုတော့ ငိုစ၇ာ၇ှိယင် လူကြီးဖြစ်ပေမယ့် ငိုပါတယ်….. မခင်မင်သူတွေက ပိုတယ်ထင်ပေမယ့်ထပ်တူ ခံစားနားလည်ပေးတဲ့ မျက်၇ည် ကူကျပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် စိတ်ဒဏ်၇ာတွေ သက်သာ၇ာ မြန်မြန်၇ခဲ့ တယ်… ဒို့ တော့ ငို ချင်လာ၇င် ထိန်းမထားနဲ့ နှလုံးေ၇ာဂါ၇တတ်တယ်လို့ တောင် ထင်မိတယ်
By: yoemei at Sep 18, 2010
Thanks for that you leaved meacomments
By: ခွန်ကြယ်ဖြူ at Sep 19, 2010